Tag: redirect htaccess | Martech Zone
Tag: redirect htaccess
Zoma, Febroary 5, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ry AT&T malala, efa mpanjifanao aho. Manana telefaona an-trano sy DSL aho amin'ny alalanao (SBC teo aloha). Tiako ny serivisy saingy maniry ny hanavao ny DSL aho ary hanararaotra ny serivisy fahitalavitra tsara anananao. Hitanareo, fonosana tsotra ihany no atolotry ny trano fonenako ary te-hanavao aho. Nandritra izay roa taona lasa izay dia nandefa mailaka mivantana mahagaga ianao izay mangataka fanavaozana ahy. Mahatsiaro azy ireo aho